चर्चित चित्लाङ: इतिहासको ज्ञान, मनोरम पर्यावरण « Lokpath
२०७७, २१ फाल्गुन शुक्रवार १९:२४
चर्चित चित्लाङ: इतिहासको ज्ञान, मनोरम पर्यावरण
प्रकाशित मिति : २०७७, २१ फाल्गुन शुक्रवार १९:२४
काठमाडौँ– ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री ? कुन मन्दिरमा जाने हो ? कुन सामग्री पूजा गर्ने ? साथ कसोरी लाने हो …?’
यो घटनाक्रम २२ सय वर्ष अघिको थियो र सोही बखत चारुमतीको सहयोगमा यता चित्रापुरमा पनि एउटा ‘चैत्य’ निर्माण भयो जसलाई अशोक चैत्य भनिन थालियो । चारैतिरका मान्छेहरुले चैत्य दर्शन गर्न आउन थाले । नेवारहरुले चैत्य आउँदा प्रयोग गरेको यहाँको बाटोलाई चैत्य लँ भन्न थाले । लँ को अर्थ बाटो हो।
यहाँ दैनिक मोटरसाइकल वा गाडीमा घुम्न आउने र फर्कनेको सङ्ख्या सयौँ छ । केही विदेशी तथा अधिकांश नेपाली पर्यटकले भरिभराउ रहने चित्लाङमा एकरात बस्नेगरी जानेको सङ्ख्या बढी हुने होटल व्यवसायी बताउँछन् । शुक्रबार यहाँका अधिकांश होमस्टे र रिसोर्ट भरिभराउ हुन्छन् ।
Greenary of Chitlang
हेटौँडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका कुशुम थापालाई पनि चित्लाङ साह्रै मन पर्यो । सहकर्मीहरुसँग घुम्न आएकी उनलाई जैविक खेती, ऐतिहासिक सातधारा, गुर्जुधारा, चन्द्र दरबार, पौराणिक वस्तुहरु आदिको भ्रमणले आनन्दित बनाएको बताउछन् ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि पहल गरेको छु : मन्त्री ढकाल
काठमाडौं । कोभिड १९ ले थलिएको पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रर्वधनका लागि चालिनु पर्ने
सौराहमा छैनन् विदेशी पर्यटक, व्यवसायीहरु मारमा
चितवन । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहमा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरु
मुगु । कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा रहेको रारा ताल मुलुुककै पर्यटनको आकर्षण मानिने
शे-फोक्सुण्डो तालमा निशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने
डोल्पा । शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ मा पर्ने शे–फोक्सुण्डो ताल क्षेत्रमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान